Missing Julie Echichi Etiti - Imewe Mmewe
Echichi Etiti Ihe osise a n’emeghe echichi na ihe ngosi di n’ime ulo ma n’èzí, ma obu oku na ndo. Ọ na-ewepụta ngosipụta mgbe ndị mmadụ na-elepụ anya site na okpokolo na-eche ka mmadụ laghachi. Ejiri ụdị iko na iko dị iche iche nke iko mee ihe dị ka ihe nnọchianya nke ọchịchọ na anya mmiri iji gosipụta mmetụta nwere ike ịchekwa n'ime. Ngwongwo ígwè na igbe na-akowaputa oke mmetụta. Obi mmadụ na-enye ya nwere ike ịdị iche n’otú e si ele ya anya dịka foto dị na ngalaba dị ihu.
Aha oru ngo : Missing Julie, Aha ndị na-emepụta ya : Naai-Jung Shih, Aha onye ahịa : Naai-Jung Shih.
Echichi Etiti Naai-Jung Shih Missing Julie